Apple iri mukutaura nevamiriri vehutano veUS kuti vape iyo Apple Watch | Ndinobva mac
Apple inoda kusimudzira iyo Apple Watch sechinhu chakakosha munyika yehutano. Pachiitiko ichi, kambani inenge ichitaurirana nevatatu zvakavanzika zvirongwa zvehutano zveMedare, kutsigira iyo Apple Watch kuvanhu vanopfuura makumi matanhatu nemashanu.
Isu tinoziva ruzivo kubva CNBC. Mukushanda inogona kutsigira mutengo weApple Watch Series 3 kana Series 4. Chokwadi iyo Series 4 ichave iyo Apple wachi inonyanya kudiwa nechirongwa ichi, sezvo ichipa mamwe mabhenefiti ane chekuita nevakuru, senge kudonha kuonekwa uye ECG basa.
Zvinotaridza kuti kutaurirana neMedare kunongotanga uye zvakawanda zvezvibvumirano hazvisati zvazivikanwa. Kazhinji, murudzi urwu rwechibvumirano, kambani inogamuchira Apple Watch inowana zviteshi nemutengo wakaderera uye ndiyo inotarisira kuibhadhara kana kuitengesa muzvikamu nevashandisi vayo. Medicare ine hunyanzvi muinishuwarenzi yehutano iyo inovhara zvakavharika zvakasiyana, kune vakwegura muUS Kune makambani akati wandei mukati mechirongwa cheMedicare uye kubva parizvino hazvizivikanwe kuti ndeapi achapa kufukidzwa uku. Mumashoko e Bob Sheehy, CEO weBright Moyo.
Kudzivisa kushanya kune iyo ER kunenge kuri kudarika kubhadhara chigadzirwa
Bright Health ikambani yeinishuwarenzi ine chirongwa cheMedicare Advantage uye Bob Sheehy ane ruzivo rwakareba muchikamu seaimbove CEO we United Healthcare.
Haisi nguva yekutanga kuti Apple inosanganisirwa nekambani iri muchikamu chehutano, ichishandisa zvidzikiso zvekutora Apple Watch. Fomula yekuvandudza zvikuru yaive yekutsigirwa kwechikwata zvichienderana nehuwandu hwekurovedza muviri kunoitwa. Izvi zvakatorwa pakati pemamwe makambani Aetna.
Parizvino hapana kambani yekuEurope iri kuvhura neApple Watch fomula yemubhadharo. Zvichida iwo musika uko Apple ichine imwe yekufamba, isati yaenda kune vakawanda kusimudzira zvibvumirano nemakambani ekugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple iri kutaurirana nevamiriri vehutano veUS kuti vape iyo yakapihwa rubatsiro Apple Watch
Ton CUDOS PEDROL akadaro
Ndiri kufara kwazvo uye NDINOKOSHA APPLE YEMAHARA BASA RAKE !!!!
Pindura Ton Ton CUDOS PEDROL
Mugadziri Jason Katims mubhadharo mutsva weApple